Tenga DHEA Powder Kuti Uwedzere Kusimba Kwemitezo & Kuvandudza - Hutano Metabolism & Kuzvidzivirira Kushanda - Mahara Kutumira & Hapana Mutero | WoopShop®
ruvara 20g 10g 100g 50g
DHEA Powder Yekusimudzira Kusimba Kwemitezo & Kuvandudza - Hutano Metabolism & Immune Basa - 20g yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Model Nhamba: B151
DHEA Main Nhanganyaya:
Dehydroepiandrosterone (DHEA) is a multifunctional steroid that has been imposed in a wide range of biological effects in people and other mammals. Pamwe chete neayo sulfate ester (DHEAS), ndiyo steroid yakawanda kwazvo muvanhu.
DHEA inogadzirwa neadrenal glands asi zvakare yakagadziriswa de novo muuropi. Inoshanda pane iyo androgen receptor zvese zvakananga uye kuburikidza nemametabolite ayo, ayo anosanganisira androstenediol uye androstenedione, ayo anogona kuitazve imwe shanduko kuti abudise iyo androgen testosterone uye estrogens estrone uye estradiol.
Zvidzidzo zvakaratidza kuti DHEA inobatsira kune varwere vane systemic lupus erythematosus. Kushandiswa kwehuchapupu kwakakurukurwa neU.S.Food and Drug Administration muna 2001 uye inowanikwa online.
Ongororo iyi inoratidza zvakare kuti cholesterol uye mamwe ma serum lipids anoderera nekushandiswa kweDHEA (kunyanya kuderera kweHDLC uye triglycerides inogona kutarisirwa mumadzimai, p110).
DHEA Basa Rakakura:
DHEA ine basa rekurwisa-kukwegura, chengetedza simba rehudiki.
DHEA yakawedzera kugwinya kwemuviri, kugadzirisa manzwiro uye kurara, kunatsiridza ndangariro.
DHEA inogona kuvandudza basa repabonde, kuwedzera libido.
DHEA inogona kudzora immune system, kugadzirisa immune immune.
DHEA ine chikamu chechipiri pakurapa kwezvirwere.
DHEA inovandudza mafungiro uye kurara
Yakanaka chigadzirwa uye sevhisi